Iran: ny angano sy ny marina momba ny Twitter · Global Voices teny Malagasy
Voadika ny 06 Jolay 2018 5:55 GMT
Vakio amin'ny teny Nederlands, Français, Italiano, 繁體中文, 简体中文, Español, bahasa Indonesia, English
Nankalaza ny ‘herin'ny Twitter’ ho fitaovana hikarakarana sy hitaterana ny hetsi-panoherana ny fitateram-baovaon'ny haino aman-jery iraisampirenena tamin'ny hetsi-panoherana Iraniana nandritra ny herinandro vitsivitsy, saingy nisy vokatra tsara sy voka-dratsy ny fiankinan-doha tamin'ny Twitter tamin'ity krizy ity. Hojerentsika ny sasany amin'izy ireo mba hamantarana ny tena haben'ny fiantraikany.
Tsy isalasalana fa ny olom-pirenena manohitra ny vokatry ny fifidianana filoham-pirenena tamin'ny volana Jona dia nahavita nampiasa tamim-pahombiazana ny Twitter, Facebook, YouTube ary bilaogy mba ‘hampaharitra mandrakizay’ ny hetsik'izy ireo sy hampiseho ny herisetra nataon'ny mpitandro filaminana, saingy ny ivon'ity hetsika ity dia ny vahoaka fa tsy ny teknolojia.
Noho ireo mpanao gazety voaràra tsy hanao ny asany sy ny mpihaino manerantany mangetaheta vaovao avy any Iran, matetika lasa loharanom-baovao voalohany ny fampahalalam-baovaon'olon-tsotra. Indrisy fa tsy dia fantatra firy hatramin'izao ny tena maha-izy azy sy ny fahamendrehan'ny mpisera twitter, ary nahita tranga izahay izay nisafotofoto ny fitantarana ny tena zava-misy sy ny zava-poronina- toy ny tamin'ny vokatry ny fifidianana filoham-pirenena ihany
1-Fitaovam-pifandraisana ho an'ny mpitarika reformista
Taorian'ny fifidianana tamin'ny 12 Jona, tranonkala maro an'ny reformista no voasivana. Nanamafy ny fifehezany ny gazety ny mpitandro filaminana, nogadraina ireo olo-malaza reformista, ary tsy navela hiditra amin'ny fahitalavitra sy radio ireo olona mbola miriaria. Ny aterineto no hany saiky varavarankely ho azy ireo mba hifandraisana amin'ny vahoaka. Manana mpanohana maherin'ny 100.000 ny pejy Facebookn'i Mir Hussein Mousavi. Ao amin'ny Twitter, manana mpanjohy manodidina ny 30.000 ny fanentanany. Ghloamhussein Karbaschi, mpanolotsaina ambony an'i Mehdi Karroubi, kandidà reformista faharoa amin'ny fifidianana, nisioka tamin'ireo mpanaraka azy miisa 5000 mba hampahafantatra ny zava-mitranga. Manampy amin'ny fampahafantarana ny fanapahan-kevitr'ireo mpitarika reformista sy mampita ny hafatra ny Twitter sy ny Facebook miaraka amin'ireo tranonkala reformista toy ny Ghlamnews.
2-Manampina ny banga eo amin'i Iran sy izao tontolo izao
Nanohina olona an'arivony manerana izao tontolo izao ny sioka Iraniana ary tamin'ny alalan'ny fanarahana sy ny fizarana sioka, dia mahatsapa ny olona fa mandray anjara. Ny lohahevitra be mpikaroka indrindra tao amin'ny Twitter nandritra ny andro maromaro dia ny #iranelection (ny “tenirohy” iresahana momba an'i Iran) ary miankina amin'ny vaovao sy sary miparitaka ao amin'nyTwitter ihany koa ny fampahalalam-baovao manerantany. Araka ny filazan'i Bloggasm, dia nozaraina in-57,8 amin'ny ankapobeny ireo sioka avy any Iran.
3-Tsy mikarakara fihetsiketsehana ny Twitter:
Mandray fanapahan-kevitra hikarakara hetsi-panoherana ireo mpitarika reformista sy ireo mpanohana azy ary mampita izany amin'ny alalan'ny fomba samihafa. Tsy manana porofo izahay fa nifampisioka ny olona tsirairay mba hikarakara fihetsiketsehana. Araka ny nolazain'i Evgeny Mozrov, mpikambana ao amin'ny Ivon-toerana Open Society ao New York tamin'ny Washington Post hoe:
“Tena manampy be amin'ny fahazoana vaovao ivelan'ny firenena ny [Twitter]. Na dia nanampy tamin'ny fikarakarana fihetsiketsehana aza izy – zavatra izay lazain'ny ankamaroan'ny fampahalalam-baovao amin'izao fotoana izao – fa tsy azo antoka mihitsy, amin'ny maha-sehatra iray ho an'ny daholobe azy, tsy manampy amin'ny fananganana revolisiona ny Twitter (afaka mamaky ireo hafatra ireo ihany koa ny manampahefana!). “
4- Mety hamitaka ny olona ny sioka
Nisioka vao haingana ny iray tamin'ireo olona marobe fa olona 700.000 no nivorivory tao amin'ny moske Ghoba ao Teheran. Olona maromaro no nisioka izany ary nandefa ny vaovao tao amin'ny bilaogin'izy ireo mihitsy aza. Mandritra izany, nanombatombana ny isan'ireo mpanao fihetsiketsehana ny fampahalalam-baovao iraisam-pirenena mahazatra fa teo anelanelan'ny 3000-5000 teo izy ireo. Inona no mety ho nitranga tamin'ny olona 699.5000 hafa?
Araka ny fanazavan'ny tranonkalam-baovao Twitter Journalism an'ilay mpanorina ny Breaking Tweets, Craig Kanalley hoe:
“Miharihary fa te-hahazo vaovao avy any Iran ny olona, ​ary amin'ny fomba ara-potoana. Noho izany dia tsy mandany fotoana betsaka amin'ny olona iray ny manao” RT “sy mandefa vaovao indray izay heveriny fa “scoop”. Saingy aiza ny mpiandry vavahady?
Ny mpizara sioka (retweeter) no mpiandry vavahady, izay mijery ny sioka ary manapa-kevitra amin'ny lanjany ao anatin'ny segondra vitsy. Izay rehetra mijery retweet dia tsy maintsy mitadidy an'izany, ary mandray ny sioka rehetra amim-pitandremana mandra-paha voamarina izany. “
5-Manavao ny vaovao sy ny toro-hevitra ny fandefasana sioka
Misioka izay vakiany ao amin'ny tranonkala ny ankamaroan'ny olona, ary nizara toro-hevitra mahasoa sy vaovao ihany koa mba hanampiana ny Iraniana hiala amin'ny fanasivanana amin'ny aterineto sy ny sivana (amin'ny ankapobeny). Amin'ny teny hafa, manampy amin'ny famoronana fanovozam-baovao ny fandefasana sioka.
6-Tsy mahatakatra ny (lazain'ny) mpandefa
Indraindray misy ireo ‘mpandefa’, tahaka ny Iraniana any Andrefana, ohatra, izay mahazo vaovao momba ny fihetsiketsehana avy amin'ny loharanom-baovao ary misioka tsy manamarina ny zava-misy, na tsy manonona izay nandrenesana. Ireo mpandray sioka- indrindra raha tsy Iraniana izy ireo – dia mety hihevitra fa any Teheran ilay olona ary misioka avy eny an-kianja.
7-Ny fikatrohana sy ny kinasa:
Mpikatroka manohana ny hetsi-panoherana ary mampiroborobo fotokevitra ny ankamaroan'ireo Iraniana misioka. Tokony hamarinina tsara ny vaovao alefan'izy ireo ary tsy ekena avy hatrany araka izay vakiana, na amin'ny maha vavolombelona manatri-maso.
Miaraka amin'ireo zavatra rehetra ireo ao an-tsaina, mazava fa ny Twitter dia sady loharanom-baovao no mety ho vaovao diso ihany koa. Ireo olona ao ambadiky ny sehatra no zava-dehibe, toy ireo olona izay mitatitra ny zavatra lazainy.